Maxkamadeynta Wariye C/casiis Koronto iyo shan kale oo saaka ka bilaabaneysa magaalada Muqdisho – idalenews.com
Maxkamadeynta Wariye C/casiis Koronto iyo shan kale oo saaka ka bilaabaneysa magaalada Muqdisho
Wariye C/casiis Koronto iyo shan kale oo lagu soo oogay dambi la xiriira been abuur kufsi ayaa saaka lagu wadaa in la horgeeyo Maxamada Gobolka banaadir, iyadoo dhageysiga dacwada loo heysto ay goor dhow ka bilaaban doonto Xarunta Maxkamada ee degmada Xamar weyne.
Qareenka u doodaya Wariye C/casiis Koronto ayaa talaadadii dalbaday in dib loo dhigo Maxkamada, si ay uga soo baaraan dagaan dacwada lagu soo oogay, iyadoo saaka lagu wado in qareenkiisa uu difaaco.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in dowladda Soomaaliya ay damacsan tahay inay xukun ku rido wariyaha, hase ahaatee dooda ka dhex taagan arrintan ayaa aheyd mid hareysay hey’adaha u dooda xuquuqda aadanaha oo dalbanayay in la sii daayo.
Qof haweeney iyo saddex kale oo iyana kiiskan lagu soo oogay ayaa iyana la soo taagi doonaa Maxkamada, waxaana gabadha ay sheegtay in la kufsaday, laakiin laamaha dambi baarista dowladda ay sheegayaan in aanay sax aheyn.
Baaritaanadii la waday intii kiiskan socday ayaa la filayaa in Maxkamada laga hor aqriyo, iyadoo Maxkamada ay dambi ku soo oogi doonto Wariye C/casiis C/nuur Koronto sida ay sheegeen garsoorayaasha Maxkamada.
Wariyeyaal badan ayaa ku qul qulaya Xarunta maxkamada Gobolka Banaadir si ay u dhageystaan dacwad qaadista Wariyahan oo noqonaya kii u horeeyay ee la soo taago Maxkamad.
Safiirka Soomaaliya u Fadhiya Koofur Afrika oo la kulmay Jaaliyada iyo Ganacsatada Halkaas jooga +Sawirro
Kenya oo sheegtay in duqeyntii Gedo ay ku dishay Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab